News 18 Nepal || चिसो मौसममा कोरोना संक्रमणबाट कसरी जोगिने ?
चिसो मौसममा कोरोना संक्रमणबाट कसरी जोगिने ?
काठमाडौं । चिसो मौसममा भाइरसहरु थप सक्रिय हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यो मौसममा रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, स्वास फेर्न कठिन हुने जस्ता समस्या धेरैलाई हुने गरेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण हानीकारक भाइरसहरु थप सक्रिय हुनु नै हो ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेका बेला चिसो मौसममा थप जोखिम निम्त्याउने त होइन भन्ने चिन्ता कतिपयले गर्ने गरेका छन् । तर कोरोना भाइरस चिसो मौसममा थप सक्रिय हुने गरेको प्रमाण भने फेला परेको छैन ।
यो भाइरसका बारेमा अध्ययनहरु भइरहेकाले अहिले नै चिसो मौसममा बढी सक्रिय हुन्छ भनेर यकिन गर्न नसकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर, अन्य भाइरस भने चिसो मौसममा बढी समयसम्म बाँच्ने सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
अहिले चिसो मौसम भएकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि वृद्धि हुँदै जाने सम्भावना भने रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । चिसो मौसममा मानिसहरु घरका झ्यालढोका बन्द गरेर बस्ने गर्दछन् । यसरी झ्यालढोका बन्दा गरिँदा हावा गुम्सिएर कोठाभित्रै धेरै समयसम्म रहन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा कोठामा धेरै जना वस्दा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सावधानी आवश्यक देखिन्छ । कोरोना भाइरसका बारेमा अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै मौसम अनुसार यसको संक्रमण दर घट्छ वा बढ्छ भनेर भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।
त्यही भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नुको विकल्प छैन । कोरोनाको महामारी तत्कालै अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै अझ बढी सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
‘माउथवास’ले ३० सेकेन्डमा कोरोना भाइरस निष्क्रिय पार्न सक्ने
मुलाको जुस खानुस्, हुन्छन् यस्ता चामत्कारिक फाइदा
कोरोना भाइरस बारे पत्ता लाग्यो नयाँ लक्षण !
शरीरमा यी लक्षण देखिए बुझ्नुस् बढिरहेछ मधुमेहको खतरा
जाडो याममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम, परिएला बिरामी
सुत्ने बेला सिरानीमुनी राख्नुस् तुलसीको पात, हुन्छ यस्ता फाइदा
यसरी घरमै निको पार्न सकिन्छ मौसमी रुघाखोकी